Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka XFS oo furay Shirweynihii 5-aad ee dib u eegista waxbarashada Soomaaliya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka XFS oo furay Shirweynihii 5-aad ee dib u eegista...
Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka XFS oo furay Shirweynihii 5-aad ee dib u eegista waxbarashada Soomaaliya
Muqdisho-(SNTV);- Raiisul wasaare ku-xigeynka Dalka Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), ayaan Maanta Magaalada Muqdisho ka daah furay shirweynihii Shanaad ee dib u eegista waxbarashada Soomaaliya.
Daahfurka shirweynaha waxbarashada Dalka waxaa joob joog ka ahaa, wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre, Wasiirka caafimaadka, wasiir ku xigeenno,Safiirro, Deeq bixiyaal caalami ah, Agaasimayaal iyo marti sharaf kale oo lagu casumay.
Shirka ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay, xoojinta nidaamka waxbarashada Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa adeeg wax barasho oo dhameys tiran.
Raiisul wasaare ku-xigeenka Dalka Mahdi Maxamed Guuleed , ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ka go’an tahay muhiimadda horumarinta waxbarashada Dalka, wuxuuna madaxda wasaaradda ku ammaanay horumarinta waxbarashada iyo dhameys tirka manjah wax tar leh.
Wasiirka waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya mudane ; Cabdullaahi Goodax Barre oo ka hadlay shirweynaha Shanaad ee dib u eegista wax barashada Dalka iyo qorshaha u degsan wasaaradda,
“Waxaa Maanta si rasmi ah noogu furmay shirweynaha 5-aad ee dib-u-eegista waxbarashada Soomaaliya oo socon doona muddo Laba Maalmood ah, isla markaana lagu eegi doono waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay wasaaradda”ayuu yiri Wasiir Goodax.
Shirka ayaa intii uu socday waxaa lagu soo bandhigay qorshaha wasaaradda wax barashada Soomaaliya iyo waxyaabaha dhameys tirka u baahan.
Previous articleGuddoomiyaha cusub ee Xamar jajab oo xilkii la wareegay
Next articleGuddoomiyaha golasha Shacabka Soomaaliya oo gaaray Xuddur